Goorma Ayey Real Madrid Soo Bandhigi Doontaa Tababaraheeda Cusub Ee Julen Lopetegui? Faah-Faahin Laga Bixiyay Qorshaha Los Blancos. – Laacib.net
Julen Lopetegui ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Madrid kadib markii ay soo kala dhamaadeen xiriirka kubadda cagta Spain oo go’aansaday iney shaqada ka ceyriyaan kadib markii uu aqbalay shaqadda Los Blancos isagoo aan la socodsiin.
Los Blancos ayaa diyaar u ah iney sida ugu dhaqsiyaha badan usoo bandhigto, balse waxey tixgelin doontaa go’aanka uu gaaro 51-jirkaan kaas oo xilli dhaw kasoo laabtay magaalada Moscow.
Julen wuxuu kasoo duulay Krasnodar isagoo soo gaaray Moscow, sidoo kalana waxaa la sugayaa inuu maanta galinka hore yimaado Madrid, waxaana lasoo warinaya in maamulka Los Blancos ay weydiin doonaan hadii ay maanta ku haboon tahay.
Hadii Julen Lopetegui uu ogolaado, Real Madrid waxey soo bandhigi doontaa, 19:00 xilliga Spain oo ku beegan 21:00 Fiidnimo (XGA).
Sawirka wadajireed ee Lopetegui iyo Perez ayaa heli doona dhaleeceyn weyn, iyadoo daka reer Spain ay aad uga careysan yahiin go’aankii ay qaateen maamulka kooxda ka dhisan caasimadda.
Macalinkii hore Porto wuxuu u fasaxan yahay inuu bilowdo qorshahiisa fasalka soo aadan, iyadoo Madrid ay yahiin difaacdayaasha koobka yurub.